Obama vs. McCain: Yakabhadharwa vs. Organic Kutsvaga | Martech Zone
Obama vs. McCain: Yakabhadharwa vs. Organic Kutsvaga
NeChishanu, Gumiguru 31, 2008 Mugovera, January 14, 2017 Douglas Karr
Kana paine chinhu chimwe chakachinja mamiriro esarudzo dza2008, iko kushandisa kweInternet. Ini ndanga ndichitaura nemutungamiriri wenyika weRepublican muno muIndiana mavhiki mashoma apfuura uye akabvuma zvizere kuti bato raida kuita zvimwe.
SpyFu Keyword SmartSearch iri rakanakisa sevhisi yekutsvaga injini dzekutsvaga, ese akabhadharwa uye ehupenyu. Vhiki rino vakavhura SpyFu Kombat. Iyo inongedzo inokutendera iwe kuenzanisa maviri anokwikwidza masosi uye kuongorora uko kwavo kuwanda mazwi akakosha pamwe nekusiyana kwavo.
Kubva kuchikwata kuSpyFu:
Kana SpyFu ichiratidza mashandisiro emazwi akakosha mumushandirapamwe wemukwikwidzi, ipapo SpyFu Kombat inoratidza kuti makwikwi aya anoona sei danho rako rinotevera. Nekupinda mawebhusaiti muSpyFu Kombat, mhedzisiro inoratidza dura rega rega rezwi rakakosha rakaputswa kuita mazwi akasarudzika uye mazwi akajairika kune vanokwikwidza. Vakwikwidzi vako? Rondedzero yakajairika inoshanduka kuita yakaderera yakaturika michero yekuvaka yako wega zano
Isu takaona kuti SEM / SEO nyanzvi dzakabatanidzwa nevapikisi vekutamba? keyword zvinyorwa, kana ivo vaingoda chimwe chinhu kubvisa avo asina kusimba mavara. SpyFu Kombat inosanganisa zviito izvi kuita chimwe. Chii chaunowana i graphical yekudyidzana, yakatarwa nemadomeni aunosarudza kukamirirana.
Iyo inoshamisa tekinoroji uye ini ndinotaurira ngano ye Barack Obama inoshamisa Internet inotevera - pamwe nekuti John McCain ari kurwira sei.
Organic Kutsvaga Vhoriyamu: Obama Anorova McCain:
Paid Yekutsvaga Vhoriyamu: McCain Kurwira Kudzoka:
Pane nyaya yakati wandei pano isingataurirwe nenhepfenyuro huru, inofanirwa kuve! Izvo tekinoroji inogona kukanganisa sarudzo iri kunakidza!
Tags: barack obamajohn mccainObamaobama maringe nemccaininobhadharwa maringe nehupenyuzvematongerwe enyikazvematongerwo enyika organic searchzvematongerwo enyika zvakabhadharwa kutsvaga
Hunhu uye Kuvimba muBlogging
Obama ndiye Anotevera Vista here?
Gumiguru 31, 2008 na9: 35 PM
Ini ndanga ndichiudza dzimwe shamwari nhasi kuti ndaifunga kuti maObamas kushandisa Indaneti ndicho chinhu chikuru mukubudirira kwake, kuisa nzvimbo dzeruzivo (voteforchange dot com uye taxcutfacts dot org) ku twitter nemamwe maficha enhau, awana nzira yekumbundira chizvarwa chizere uye kutaurirana navo munzira yavo yavanoda.
Iro ramangwana rekuratidzira riri kuiswa nekamba yaObama-Biden, isu tichaona zvimwe zveizvi mumakore anotevera.
Darika Hire UK
Nov 3, 2008 pa7: 12AM
Kutaura chokwadi ndinobvumirana newe ipapo adam, its has a big impact for sure he sure anoziva zvaari kuita!
Mbudzi 3, 2008 na1: 48 PM
Izvo zvinonyatsopusha pfungwa dzangu nezve spyfu ihwo huwandu hweruzivo rwavanopa. Vari kuwana kupi nhamba yavo ?! Ini handifunge kuti mishumo yakazara yakadaro inogona kuwanikwa nekuda kwekuvanzika mirau.
Nov 5, 2008 pa11: 58AM
ikozvino Obama akahwina iyo iwe yaunofunga kuti inobhadharwa zvirinani kana organic 😉
Mbudzi 5, 2008 na12: 29 PM
Iko kune zvakanakira uye zvinokanganisa PPC uye Organic nzira dzekutsvaga, asi ini ndagara ndichifunga kuti kuvaka hwaro hwekuvimba uye hukuru hunotevera ibasa reblog uye yekutsvaga kwekutsvaga.
Ini ndinoti kuuraya ese mapenzi mapolls, iyi inogona kunge iri nzira huru yekufungidzira edu emangwana vezvematongerwo enyika!
Mar 16, 2010 pa 6: 14 AM
ko semrush? wakamboedza sevhisi iyoyo here?